အသီးဖျော်ရည်တွေက သင့်သွားတွေကို ပျက်စီးစေသလား - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » Latest Health Informations » ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း » ခံတွင်းကျန်းမာရေး » အသီးဖျော်ရည်တွေက သင့်သွားတွေကို ပျက်စီးစေသလား
ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြု သစ်သီးဖျော်ရည်တွေဟာ အခုနောက်ပိုင်း ဟော့ဖြစ်နေပြီး အသောက်များလာကြပါတယ်။
ဒီသစ်သီးဖျော်ရည်တွေကို နေ့စဉ်သောက်ခြင်းဟာ ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေတယ်ဆိုပေမယ့် သွားနဲ့ခံတွင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကိုလည်း ဖြစ်စေတယ်လို့ London Smiling သွားနဲ့ခံတွင်းအဖွဲ့အစည်းက သွားဆရာဝန် Dr Uchenna Okoye က ဆိုပါတယ်။
အဆိုပါ သစ်သီးဖျော်ရည်တွေဟာ သင့်ကို ပိန်သွယ်စေရုံသာမက ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့အပြင် နှင်းခူလိုမျိုး အရေပြားရောဂါတွေကိုတောင် ကုသပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အဆိုပါ ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြု သစ်သီးဖျော်ရည်တွေဟာ သစ်သီးနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ စားသုံးမှုကို တဖက်တလမ်းက များပြားစေတဲ့အတွက် ဗီတာမင်ဓာတ်ချို့တဲ့မှုကို လျှော့ချပေးနိုင်တဲ့အပြင် အမျှင်ဓာတ်ရရှိမှုကိုလည်း များပြားစေတာကြောင့် အစာကြေဝမ်းမှန်စေတယ်လို့လည်း ဖျော်ရည်ပရိသတ်တွေက ပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အချိုဓာတ်လွန်ကဲခြင်းဟာ ကျွန်တော်တို့တတွေရဲ့ သွားနဲ့ သွားဖုံးကို ပိုမိုယိုယွင်းပျက်စီးစေပြီး ဆိုးရွားတဲ့ သွားနဲ့ခံတွင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကိုလည်း ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။
သွားကြွေလွှာတွေကို ထိခိုက်စေတဲ့အပြင် သွားဖုံးတွေကိုလည်း ပျက်စီးစေပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သင့်သွားတွေဟာ ပိုမိုယိုင်နဲ့ပျက်စီးလာမှာ ဖြစ်တာမို့ အဆိုပါ သစ်သီးဖျော်ရည်တွေကို အသုံးပြုပြီး သင့်ခန္ဓာကိုယ်က အဆိပ်အတောက်ဖယ်ရှားမှုကို ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမယ်ဆိုရင် နောက်ဆုံးမှာ သွားတွေကျွတ်ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။
သစ်သီးအများစု (အထူးသဖြင့် ချဉ်တဲ့အသီးတွေ)ဟာ အက်ဆစ်ဓာတ်တွေ ပါဝင်တာကြောင့် သွားကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။သံပုရာသီးက အဆိုးဆုံးပါပဲ။သူတို့မှာ citric acid ပမာဏ မြင့်မားစွာ ပါဝင်တာမို့ သွားကြွေလွှာတွေကို တခဏအတွင်းမှာ ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။
သွားအရောင်ပြောင်းခြင်း : သွားတွေဖြူဖွေးနေအောင် ကြွေလွှာတွေက လုပ်ပေးထားပါတယ်။ကြွေလွှာတွေပျက်စီးတဲ့အခါ သွားအတွင်းဖက်မှာရှိတဲ့ dentin ဆိုတဲ့ ဓာတ်ပစ္စည်းတမျိုးက အပေါ်ယံကို ထွက်ပေါ်လာတာကြောင့် သွားတွေဟာ အဝါရောင်ပြောင်းလာရပါတယ်။
သွားထပ်တွေ အကြည်ရောင် ဖြစ်လာခြင်း : သွားထိပ်တွေ အကြည်ရောင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ကြွေလွှာတွေပါးလာပြီး လိုအပ်သလောက် ကြံ့ခိုင်မှုမရှိတော့ဖူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်ပြီ၊ အပေါ်မှာ ပြောပြခဲ့တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကြောင့်တော့လည်း ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြု သစ်သီးဖျော်ရည်တွေကို မသောက်တော့ဘဲ ရှောင်စရာတော့လည်း မလိုပါဘူး။
အန္တရာယ်တွေ ရှိလာနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် သင့်အနေနဲ့ ထိခိုက်မှုတွေကို ကြိုတင်ရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။ဘယ်လိုကြိုတင်ကာကွယ်ရှောင်ရှားရမလဲဆိုတာကို အောက်မှာ မျှဝေပေးထားပါတယ်။
ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြု သစ်သီးဖျော်ရည်တွေအစား ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်ပြီး အကျိုးလည်းရှိတဲ့ အဆီတွေကို ပြောင်းစားပါ။သစ်သီးဖျော်ရည်တွေ ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေအားလုံးကို အဆိုပါ အဆီတွေကနေ ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့အတွက် သူတို့ဟာ သစ်သီးတွေနေရာမှာ ကောင်းစွာ အစားထိုးဝင်ရောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါ့အပြင် သင့်သွားတွေကို ထိခိုက်မှာလည်း မပူရတော့ပါဘူး။ရေတခွက်ထဲမှာ အဆီလေးတစက်နှစ်စက်လောက် ထည့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။
သင့်သွားတွေကို သေချာထိန်းသိမ်းပါ၊ ဒီသွားတွေက နောက်တစ်ကြိမ်အခွင့်အရေး ပြန်မရနိုင်ပါဘူး
သင့်သွားတွေ ဖြူဖွေးလာစေဖို့အတွက် နည်းလမ်းကောင်း ဆယ်ချက်
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ စကျတငျဘာ 19, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း စကျတငျဘာ 19, 2017
Are Juice Detoxes Ruining Your Teeth?
How trendy juice diets are ruining our TEETH: Dental damage is ‘soaring’ due to sugar and acid in the
drinks eroding away enamel.
diets-ruining- TEETH-Dental- damage-soaring- sugar-acid- drinks-eroding- away-tooth- enamel.html
water-in- morning-bad- for-teeth/
သွားတိုက်တဲ့အခါ မှားယွင်းစွာ လုပ်မိနေတဲ့အချက် (၅)ချက်
ကလေးရဲ့ သွားနဲ့ ခံတွင်းကို ဂရုစိုက်ဖို့ မေ့လျော့နေပြီလား
သွားပွတ်တံဆို အကုန်အတူတူပဲ မဟုတ်ဘူးလား။ ကောင်းတာမကောင်းတာ ဘာကွာလို့လဲ။
အဆီကျအားကစားမလုပ်ခင် စားမိတတ်တဲ့ အဆိုးဆုံးအရာများ
အံဆုံးသွားနှုတ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေသိထားသင့်လဲ